Nabadgelyo Xannibaad & Khadadka - Soo dhawow HTML5 > Vielhuber David
Nabadgelyo Xannibaad & Khadadka - Soo dhawow HTML501
Cusbooneysiinta qeexitaanka HTML5 waa badan yihiin qaar badan oo ka mid ahna waxaa horeyba u taageeray aqlabiyadda shabakadda biraawsarka - hoosta waxaan rabaa inaan ku muujiyo isbeddel xiisa leh oo ku saabsan xeerarka walxaha buulka. HTML marwalba wuu kala soocayay inta udhaxeysa xayndaabka iyo waxyaabaha gudaha ku jira Qeexitaanka Nooca Dukumintiga ee HTML4, tusaale ahaan, magacyada h1, p, iyo div oo ah walxo xannibaadda iyo a, taako, img sida cunsurrada laynka.
Fikraddan hadda waa laga tegey (sababo wanaagsan awgood). Kiisaska isticmaalka qaarkood, naqshadeeyayaal badan oo webka ah ayaa iska indha tiray saxnaanta sharciga buul-ku-sheegga ee ah in walxaha xannibani aysan ku dhex jiri karin walxaha dusha ama hab-dhaqanka caadiga ah iyadoo la adeegsanayo xeerarka CSS sida muujinta: inline; ama bandhig: block; (taas oo inta badan horseeday koodh aan ansax ahayn) iyada oo aan la sii ambo qaadin.
HTML5 ayaa hadda jilcineysa kala soocidan oo xitaa waxay magacawday 9 qaybood oo kaladuwan oo cunsur ka tirsanaan karo, taas oo cunsurku ku noqon karo dhowr qaybood. Farqiga duugga ah ee u dhexeeya xannibaadda iyo walxaha dusha ayaa lagu tuuray dusha sare iyo macnayaasha faraha badan ee calaamadaha shabakadda ayaa lagu xisaabtamayaa. Gaar ahaan, tani waxay leedahay cawaaqibka in dhismayaasha soo socda ay matalaan koodh ansax ah:
Weel dhan oo ay ku jiraan waxyaabo dheeri ah oo dheeri ah ayaa markii hore suurtagal ahaa oo keliya (oo leh koodh ansax ah) iyadoo la adeegsanayo tabaha (tusaale ahaan, iyadoo si buuxda loo meelaynayo lakab isku darka) Haddii kale, waxaad isku xirtay cinwaanka iyo baaragaraafka - tani waxay iyaduna horseedday shaqo-dhimis oo weelku lama riixi karo. Marka lagu daro soo dhaweynta HTML5, tani dhib maahan hadda.